musha nyika dzakabatana Singers Ariana Grande Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
CB inotaura Nhoroondo Yese yeMuAmerican muimbi anonyanya kuzivikanwa nezita rezita rezita "Ari ”. Yedu Ariana Grande Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kweAmerican Singer kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yeupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Kunyanya zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva nezve rake risinganzwisisike izwi timbre. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Ariana Grande's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Ariana Grande Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Ariana Grande akaberekwa musi we 26th waJune 1993 kuBoca Raton muFlorida USA. Anogovera Florida seguta rekuberekwa nevanozivikanwa vanosanganisira, Kutonga kweRoma, Rick Ross, Wesley Snipes, William H. Macy pakati pevamwe.
Mwana Ariana akaberekerwa naamai vake Joan Grande (mukuru mukuru wekambani yekukurukurirana) uye kuna baba vake Edward Butera (mufananidzo wemagetsi).
Kukura muBoca, taundi diki riri kumabvazuva kweFlorida, Ariana mudiki aive nekambani ine rudo yevabereki vake nehafu-mukoma Frankie (inoratidzwa pazasi naAriana). Ivo zvechokwadi vaitaridzika kuva vakanaka uye vakanaka.
Vabereki vake vane hupfumi mune zvemari vaive vakaroora vehukama vakaita iyo The Arts chikamu uye chikamu chekurera kwavo kwehudiki. Nekuda kweizvozvo, Ariana aiwanzoendeswa kumitambo yemimhanzi asati akura 4.
4 Makore gare gare musikana wechidiki (akafananidzirwa pazasi) akaita kekutanga kuTerevhizheni achiimba rwiyo rwenyika rweUSA kuFlorida Panthers Hockey Game.
Kuwedzerwa kune iyo TV kutanga kwaive kuita kwake mumimhanzi yeWizard yeOz pamwe naBeauty uye Chikara.
Izvo zvataurwa pamusoro apa zvaingova mashoma ekuedza kwaAriana kwekutanga, kunyanya kana achienzaniswa nemamwe akawanda ayo aizozoita achinyora kufambira mberi mune zvedzidzo.
Ariana Grande Dzidzo:
Ariana akawana dzidzo yake yepamusoro paPine Crest School muBoca Raton vasati vaenderera mberi North Broward Kugadzirira Chikoro muFlorida nokuda kwechikoro chake chesekondari.
Yaiva pachikoro chesekondari kuti Ariana akwegura ane 13 akatsunga kuvaka basa mumimhanzi. Nokudaro, akadzidzisa izwi rake pasi pekudzidziswa kwaEric Vetro (akafananidzirwa pasi), mudzidzisi wezwi anozivikanwa kuti akavandudza mazwi Katy Perry uye Jason Durelo.
Paakapedza makirasi ekudzidzisa, Ariana akapiwa chipupuriro chekuita kuti apiwe basa rokutamba basa mumimhanzi. Saka zvakatanga Rwendo rwemudiki wechidiki musikana mukurumbira mumhizha yemimhanzi.
Ariana Grande Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Yekutanga kumira paRwendo rwemakore gumi nematatu Rwendo yaive muLos Angeles uko akasangana neManeja kuti ataure chishuwo chake chekurekodha R & B album. Zvinosuruvarisa kuti haana kutorwa zvakanyanya nekuda kwezera rake. Ndiani angadai akatora ane makore gumi nematatu- akakomba?
Ariana akasuruvara akadonha kumashure pakuita makirasi netariro yekurarama kurwisa nzira yake muindasitiri yemimhanzi rimwe zuva.
Paaive pamitambo yekudzidzira akakwanisa kuwana kukanda saCharlotte mune akabudirira Broadway Musical 13. Basa rakakunda Ariana mubairo wake wekutanga wekuremekedza kubva kuNational Youth Theatre Association.
Kutevera kubudirira kwaAriana neBroadway Musical 13, maneja akamutsvaga achiunza zvaaisakwanisa kuramba.
Lil Wayne Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Nekuda kweizvozvo, mukurumbira wake wekutanga wakaita kuti zvimuomere kudzidza muchikoro semwana wechikoro chesekondari asi akagashira zvekudzidzisa kure kumba. Iko kukurumidza kuchinja kwemamiriro ezvinhu.
Ariana Grande Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Iye wechidiki uyo anga achikurudzira iwo mukurumbira paterevhizheni akazopedzisira abudirira mu2009 paakakandirwa muNickelodeon terevhizheni Anokunda.
Izvo, zvakadaro, zvakada Ariana vhudzi rake bvudzi kubva pane tsvuku tsvuku kusvika kuvelvet vara. Ndiwo mutengo mudiki wekubhadhara zvakadaro.
Gore rakatevera muna 2010, Ariana akaita imwe kuyedza yekupinda muindasitiri yemimhanzi. Sevha kweNguva ino, iye anga asiri kufamba achitenderera mamaneja kuti anyore demo rake.
Kusvika pakubudirira kubva kune yakasarudzika kona akaisa kutaridzika mumhanzi uye pamwe achikurudzirwa Justin bieber kubudirira nenyaya, akaendesa mavhidhiyo aanoimba kuri YouTube.
Izvi zvakabata pfungwa yaMonte Lipman, CEO weRepublic Records akamusainira kurekodhi yake. Paaive pane rekodhi rekodhi akarekodha masingle, akapindirana achiimba pamwe nekuisa zvimwe zvinoonekwa zveTV uye muna 2013 akaburitsa maalbum maviri "Wako Chokwadi" uye "Kissimesi yeKisimusi".
Ose ari maviri aive nema singles akakwira mabhodhi uye akagamuchirwa kwakanaka kubva kuvatsoropodzi. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ariana Grande Rudo Hupenyu:
Hupenyu hwevakakurumbira hunogona kufungidzirwa sekumuka nekuvira kwezuva. Kubva pakurambana, makeup, muchato uye kurambana vaimbi vekuAmerican nevanozivikanwa vekuHollywood vanoita kunge vanowana zvese zvakanaka kunze kwehukama hunogara. tinokuunzira ruzivo nezve ekare hupenyu hwehukama hwaAriana uye hwazvino.
Kutanga yaive yake "pre-mukurumbira" hukama naGraham Phillips. Ivo vaviri vakasangana mu2008 vachitarisa mu Broadway Musical 13. Vakafambidzana kwemakore matatu vasati vaenda vakasiyana nzira.
Akazove nehukama nehukama hwehukama kure naJai Brooks. Idzo dzaimbova shiri dzerudo dzakasangana neinternet uye dzakange dzaenda uye pahukama.
Brooks aigara muAustralia kune chikamu chiri nani chehukama hwavo apo Ariana aigara muUS. Vakafambidzana kusvika 2013 vasati vaunza hukama hwavo husina kujairika hwemagumo kusvika kumagumo.
Kufamba paAriana kwaive nezvingangotsanangurike senge zvinyowani zverudo naNathan Sykes (3), Big Sean (4) naRicky Álvarez (5). Dzese nhatu dzaive hukama hwakangogara kwemwedzi mishoma.
Ariana anozivikanwa zvakare kuti akambodanana nemuchakabvu rapper Mac Miller uyo akafa nenjodzi yekunwisa zvinodhaka munaGunyana 2018. Akanga aparadzaniswa nerunyararo nemurapi asati afa mwedzi yakati gare gare.
Chazvino chehukama hwake hwaive naPete Davidson. Vakapfimbana munaJune, mwedzi mishoma mushure mekunge arambana naLate Mac Miller.
Kufambira mberi zvakanyanya kusvika parinhasi Pete Davison ave kunzi saAriana aimbove murume-shamwari uye shamwari nekuda kwekuti kufa kwaMac Miller kwakakanganisa Ariana ndokuisa kusagadzikana pahukama hwavo.
Ariana Grande Hupenyu Hwemhuri:
Ariana Grande akaberekerwa mumhuri yevana isu tinokuudzai nezvemhuri yake.
Nezve Ariana GrandeBaba va:
Edward Butera ndiye baba vemuimbi. Iye akazvarwa pa 20th yaGunyana 1958.
Edward uyo ane graphic dhizaini dhizaini inonzi IBI dhizaini muBoca Raton akarambana namai vaAriana apo muimbi aive nemakore masere ekuberekwa. Kunyange zvakadaro, anoramba achitaurirana nemwanasikana wake uye anotsigira zvaanoedza kuita.
About Amai vaAriana Grande:
Joan Grande ndiye amai vemuimbi. Iye akazvarwa pa11th yaJune 1968. Muimbi anoreva kuna amai vake sevanoshanda nesimba. Joan anoshanda nesimba achipihwa chokwadi chekuti iye ndiye Chief Executive Officer weHose-McCann Kutaurirana.
Nezve Ariana Grande's Mukoma:
Ariana ane hafu-mukoma anozivikanwa saFrankie J. Grande. Frankie uyo akakurira pamwe nemuimbi akaberekwa nehukama hwakapfuura pakati paamai vaAriana Joan Grande uye mumwe Victor Marchion.
Frankie senge hanzvadzi yake akanyora zvekubudirira muindastiri yemimhanzi semuimbi uye mugadziri. Kunyangwe iye kubvira abvuma kuve ngochani, Ariana achiri kumuda sehama.
Ariana Grande Biography - Manchester Bhomba:
Iyo 22nd yaMay 2017 raive zuva rinosuruvarisa kuna Ariana uye indasitiri yemimhanzi nekuda kwekuzviuraya bhomba kuManchester Arena yeManchester City mushure mekonzati yaAriana Grande.
Vafudzi vakanga vauya mukonti vaibva apo mutezi weIslam akaparadza bhomba rakagadzirwa nemapuranga, akauraya vashoma kupfuura vanhu ve23 uye achisiya 139 vamwe vakakuvadzwa.
Kurwiswa kwakakonzera kurangarirwa kwakajeka kuAriana uyo akazoti aisvimha misodzi kwemazuva.
"Ariana akachema kwemazuva mushure mekurwiswa kweManchester Arena uye akanzwa" mazita ese "evakakuvadzwa vakafa mubhomba".
Yakarondedzerwa mutariri wake, Scooter Braun.
Vhiki mbiri gare gare, Ariana nedzimwe nyeredzi dzakaitwa kuOne Love Manchester konzati yekuunganidza mari kune avo vakawirwa nedambudziko iri. Ariana akavhunduka akatadza kutaura nezvekurwiswa kwekonzati yake kusvika gore rakatevera paakatanga kutaura nezvazvo nenzira inotevera:
“Ndihwo hunhu hwakashata kwazvo pavanhu, mumhanzi unofanirwa kuve chinhu chakachengeteka kwazvo pasi rese. Ini ndinofunga ndosaka ichiri inorema pamoyo wangu zuva rega rega. Ndinoshuva dai paine zvimwe zvandaigona kugadzirisa.
Iwe unofunga nekufamba kwenguva zvichave nyore kutaura nezvazvo. Kana iwe uchaita rugare nazvo. Asi zuva nezuva ndinomirira rugare irworwo kuti rwuuye uye zvichiri kurwadza zvikuru ”.
Ariana ave achikwanisa kuwana akati wandei ekutsigira madhiri akamupa mukurumbira paTV neindastiri yemimhanzi.
Ivo vanosanganisira avo vane Brookstone Cat-Nzeve mahedhifoni, cosmetic company - MAC Glam, American zvipfeko brand uye mutengesi - Guess, global athletic shangu uye mbatya kambani - Reebok, yeBritish fashoni brand - Lipsy, mhando yemabhodhoro emvura - Wat-aah pakati pevamwe . Ko mukurumbira hausi kushanda mashura kune wechidiki muimbi mambure akakosha here?.
Ariana Grande Hupenyu hweMunhu:
Ariana muimbi ane mweya ane hushamwari. Runako runoda bvudzi refu uye hombe ponytail zvinoyemurika zvinonzwisisika hunyanzvi uye hupenyu hwega munzira dzisingafungidzike. Akapihwa ane akanaka uye mukombe kumeso zvinokwana kuti ataure Hunhu hwake Zvakangoita kunge Ari Kukura Teen.
Nezve izvo zvaaitenda, Ariana akarerwa seRoman Catholic asi akasiya chiKatorike nekuda kwekushora kuchata kweungochani.
Zvakanaka, izvo hazvifanire kurova chero munhu sechishamiso chakapihwa kuti ari kuyedza kusimudzira zvido zvehama yake ngochani.
Ari kure nechitendero, anotevera dzidziso dzeKabbalah dzinokurudzira kuve wakanaka kune vamwe nechinangwa chekukwezva zvinhu zvakanaka kwauri.
Hazvishamisi kuti ane zvishomanana zvoupiro zvaanoedza kuita kune chikwereti chake kusanganisira kuita zviitiko zvezvipo zvinokonzera mari uye kugamuchira zvinhu mumagazini kuti zvikurudzire zvikonzero.
Pamusoro pechifambi cheunhu hwake, Ariana ane mafungiro anoshamisa uye dzimwe nguva angaisa mafungiro asina kunaka muHurumende.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading yedu Ariana Grande Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!